NOOCYADA BEERISTA YAANYO MARINA GROVE: SHARAXAAD IYO DABEECADAHA KALA DUWAN - NOOCYO YAANYO
Bannaanka iyo beeraha waa mid aad u dalbanaya dalaggooda oo inta badan kuma faraxsan yihiin iyaga. Xitaa xirfadlayaal khibrad leh ma aha marwalba inay isku darsadaan dhadhanka wanaagsan ee miraha leh dalag ballaaran. Tani waxay si buuxda u khuseysaa yaanyada.
Yaanyo badani waxay dhadhamiyaan weyn marka la isticmaalo cusub, laakiin gebi ahaanba maaha kuwo ku habboon ilaalinta, iyo sida kale.
Maadaama ay adag tahay in la doorto noocyo kala duwan oo yaanyo ah oo ku haboon dhinacyada, waa caadi in la beero dhowr nooc oo iyaga ka mid ah. Laakiin marka la eego kala duwanaanta noocyada kala duwan ee loo yaqaan 'Marina Grove', ayaa arrintaan la xaliyay.
Haddii aad hore u go'aansatay inaad isku daydo yaanyo Marina Grove, waxaad hubaal ka noqon doontaa astaamaha iyo sharaxaadda kala duwanaanta. Aynu isku dayno in aan wax ka qabano arrimahaas.
Tomato Marina Grove: sharaxaad kala duwan
Tamaandhada Maryina Grove waxay leedahay sharraxaadan soo socda: geedku wuxuu gaaraa 150-170 cm oo dherer ah, sidaa daraadeed waxa ugu wanaagsan in la koro nooca noocan ah ee yaanyo leh laba afkeelo.
Muraayadaha waxaa laga yaabaa inay kuu muuqdaan kuwo awood leh, laakiin weli waxaad u baahan tahay inaad xirto, iyo marka miraha ay bilaabaan inay bislaadaan, waxay u baahan doonaan taageerooyin leh miraha.
On baadiyaha ah ee Marina Grove waxaa jira tiro badan oo caleemo cagaaran oo yar yar, taas oo qaabkooda u eg midhaha.
Bannaanka u khibrad leh waxay ku taliyaan in laga saaro caleemaha hoose kadib markii si buuxda loo sameeyay. Tani waxay hagaajineysaa bixinta tamaandhada leh nafaqooyinka iyo hawo qaadashada ciidda godadka.
Ma taqaanaa? Waxaa soo baxday in dhammaan yaanyada ay ka badan yihiin 90% biyaha.
Waxyaabaha kala duwan ee yaanyada Maryina Rosh waa mid aan qabin in ay iftiimiso oo ay adkeyso heerkulka.
Qaababka lagu beerayo yaanyo
Si aad u beerto yaanyo waxaad u baahan tahay inaad dooratid maalinta diirran markaad u socoto geedo ku-tallaalid dhulka. Waxaa lagu talinayaa in ay ku quudiyaan yaanyo leh Bacriminta macdanta. Soo dajinta sariiraha waa in la bilaabo kaliya marka ciidda lagu kululeeyo aqalka dhirta lagu koriyo. In geedi socodka koritaanka iyo formation of geedo u baahan yihiin in la siiyo quudin adag oo adag.
Halkee ayaa ah meesha ugu fiican ee lagu aaso Marina Grove
Haddii aad marka hore dooratay abuurka yaanyo ee Marina Grove, waxaad xiiseyn doontaa in la beerto arrimaha.
Tamaandhada Maryina Roscha khubarada waxay ku talineysaa in ay sii korodho dhulka la ilaaliyo. Sidaa darteed, lagu koriyo si gaar ah u qalabaysan yihiin ku habboon kala duwan ee yaanyada. Sariiraha furan, yaanyadaas waxaa lagu beeray oo kaliya gobollada koonfurta.
Tamaandhada ayaa si cad u ah ciidda ay ku koraan, sidaas ciidda waa in ay ahaato heerkul gaar ah. Seeds ayaa Giriig ah heerkul aan ka yarayn +14 ° C, ugu fiican ee horumarintooda waxaa loo tixgeliyaa + 22 ... +26 ° C inta lagu jiro maalinta iyo + 16 ... +18 ° C habeenkii. Heerkulka ka hooseeya +10 ° C iyo wixii ka sarreeya +32 ° C wuxuu yareeyaa koritaanka abuurka, iyo heerkulka ka hooseeya 0 ° C geedo way dhintaan.
Inta lagu jiro xilli sii kordhaya, heerkulka ciidda waa inuu ahaadaa + 18 ... +20 ° C. Tamaandhada Maryina Rosh nidaamka xidid awood leh, oo sidaas daraaddeed waxay u baahan yihiin waraabin badan. Ciidda ka badan ciidda waxay sababi kartaa ubaxyo iyo ugxansiyo si ay u dhacaan, iyo sidoo kale miraha la gooyo.
Wixii dalxiiska badan oo miro dheregsan oo ciidda qoyan oo hodan ah ee macdan iyo nafaqooyin. Sidoo kale, yaanyadaasi waxay si fiican u koraan xayndaabka loamy ee si sahal ah loo gooyo iyo si dhakhso ah u kululeeyo.
Xayawaanka cagaaran iyo peat waxay yihiin kuwo aad u qabow, iyo carrada ciidda waxay u baahan yihiin bacrimin badan, maadaama ay ku jiraan waxyaabo yar yar oo organic ah. Tamaandhada dhabta ah kama falcelinayaan aysidhka carrada iyo si fiican u goosta.
Ma taqaanaa? Caleemaha yaanyo waa sun.
Geedo geedo ah Marina Grove
Mawduuc muhiim ah ee geedo waa diyaarinta beeritaanka, kaas oo billaabaya mudo dheer ka hor beerashada deganaanshaha joogtada ah. Si looga hortago dhammaan noocyada cudurada ku daweeyaan geedo Bordeaux isku daraan. Nidaamkani waa suurad wacan in la sameeyo ka dib markaad transplanting dhulka.
Laba toddobaad ka hor dhacdada, geedo bilaabaan xanaaq. Si taas loo sameeyo, in lagu koriyo oo si joogto ah u saaro jir ah. Haddii geedo si fiican u adag yahay, ka dibna waxay noqotaa lilac.
Labo maalmood ka hor laga beeri geedka kasta, waa in la jaro laba qaybood oo hoose. Tani waxay ka caawin doontaa geedo si fiican u degaan meel cusub. Haddii geedo ka mid ah ay diyaar u yihiin beddelka tallaalka, oo aanad kari karaynin xilligan, ka dibna jooji waraabinta iyo hoos u dhig heerkulka hawada - tani waxay joojinaysaa koritaanka warshadda mudo ah.
Si aad u ilaaliso burooyinkeeda burushka ugu horreeya, waxaad ku rushaysaa xal boric shan maalmood ka hor laga beerto (1 g of boric acid 1 litir oo biyo ah). Geedka abuurista, diyaar u ah beeritaanka, wuxuu leeyahay burooyinkeeda gacanta, jirid qaro weyn, caleemo waaweyn iyo nidaam xidideed oo horumarsan.
Waxaa ugu wanaagsan in geedo geedo lagu sameeyo dhawr booqasho. Maadaama ay tahay suurad wacan in lagu meeleeyo Marina Grove oo dhulka la ilaaliyo, wakhtiga abuuritaanka wuxuu ku xiran yahay nooca iyo meesha carrada.
Iyada oo guga diiran ah waxaad ku beeri kartaa geedo ee lagu koriyo oo lagu kululayn jiray maalmaha ugu dambeeya ee April. In lagu koriyo oo aan kuleyl, laakiin leh dabool dheeraad ah ee geedo leh foorno ah - on May 5-10, iyo in lagu koriyo oo aan kululeyn iyo hoy la'aan - on May 20-25. Laakiin dhammaan shuruudahan waa kuwo qaraabo ah - cimiladu waxay ahaanaysaa xijaabka ugu muhiimsan.
Sidaa daraadeed, si looga hortago khatarta hore ee beerto ee qaabka dhaxan, waxaad u baahan tahay inaad daboosho aqalka dhirta lagu koriyo laba lakab oo filim ah meel fog oo ah dhowr mitir oo u dhexeeya iyaga.
Diyaarinta ciidda beeritaanka waxay u baahan tahay inay dhacdo. Xoqo sariiraha tamaandhada horay u bacrimiya iyaga oo leh compost ama humus. Isla markiiba ka hor beerto, ku dar Bacriminta macdanta si ciidda, sida superphosphate ama chloride potassium. Inta lagu jiro koritaanka ciidda yaanyo waxay u baahan tahay dabacsan, waraabinta iyo jaridda.
Tan iyo noocyada kala duwan ee Marina Grove waa hybrid, diyaarinta abuur ah waa in ay ahaato mid ku habboon. Noocyo Hybrid ee yaanyada waxaa loogu talagalay beerto in lagu koriyo. Beeridda waa in la sameeyaa Febraayo 15-20 sanduuqyada ama sanduuqyada leh dherer aan ka badnayn 10 cm.
Waxaad iibsan kartaa ama diyaarin kartaa ciidda naftaada:
Qaado qaybo siman oo khudaarta ah, peat iyo dhul sodon. On baaldi of isku dar ah, ku dar 1 qaado oo ash alwaax iyo 1 qaado oo ah sulfate potassium iyo superphosphate;
Qeybaha isku midka ah ee peat isku qasan leh humus, ka dibna baaldi ee isku dar ah, ku dar digsi leh litir oo ciid ah webiga iyo qaado oo ah ash alwaax ama burka dolomite, iyo sidoo kale qaado oo ah superphosphate.
Tamaandhada miraha Maryina Grove pre-soaking muhiim maahan. Isku dar kasta waa in si fiican loo qaso toddobaad ka hor intaadan beeran. Waa inay qoyaan. Ka hor inta aan ku beeranin isku dar ah ayaa lagu shubay sanduuq, heerkul ah oo is dulqaadan. Ka dib markii la waraabiyey xal of humate sodium, kaas oo ah in ay leeyihiin heerkul ah kala duwan + 35-40 ° C iyo midabka biir ah.
Ka dibna waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyaan geesaha 5-8 cm, oo qoto dheer oo aan ka badnayn 1.5 cm Seeds lagu beeray kareerahaan fogaan ah 2 cm midba midka kale. Kadibna waxay yihiin budo. Sanduuqyada seeding waa in lagu meeleeyo meel diiran oo kulul. Toddobaadkii, caleemaha ayaa soo baxaya.
Qiimaha sawirada Maryina way soo baxday
Ubaxyo leh labada caleemo quusashada (transplanted) 8 x 8 cm dheriyo. Geedo ayaa ku kori doona iyaga aan ka badneyn 20 maalmood. Tani, sanduuqyada waxaa ka buuxsamey isku dar ah ciidda oo lagu waraabiyey xalkan: 0.5 g oo ah daloolka potassium ayaa lagu daraa 10 litir oo biyo ah oo leh heerkul ah 22-24 ° C. Marka qaadashada geedo, waa lagama maarmaan in la kala saaro tijaabooyinka jiran ee kuwa caafimaadka qaba. Haddii geedo yar yar yahay, ka dibna astaamaha ayaa la dhimi karaa badh, iyadoo caleenta cotyledon ka tagto dusha sare.
Saddexda maalmood ee ugu horreeya ka dib marka la soo qaadayo, heerkulka hawadu waa inuu ahaado 20 ... +22 ° S inta lagu jiro maalinta iyo + 16 ... +18 ° S habeenkii. Marka geedo qaado xididka, heerkulka waxaa lagu yareeyaa + 18 ... +20 ° S inta lagu jiro maalinta, iyo habeenkii ilaa + 15 ... +16 ° C. Waraabiyaa geedo la qaado toddobaadkii hal mar, laakiin si ay ciidda gebi ahaanba qoyan tahay. Waraabinta soo socota, ciidda waa inay qallajisaa wax yar, laakiin waa in aan loo oggolaan in ay si buuxda u qalalaan.
Laba toddobaad ka dib qaadashada, geedo waa in la quudiyo. Si tan loo sameeyo, 10 litir oo biyo ah waa in lagu qasi karaa miisaanka nitrofoska. Isticmaalka - ku saleysan muraayadda dheriga.
Saddex usbuuc ka dib, geedo u baahan yihiin in laga soo shubo sanduuq yar oo waaweyn (12/12 cm). Ha ku qodin geedo. Isla markiiba ka dib markii la beero, ku shub biyo diirran oo ka baxsan ciidda si ay u hesho qoyaan. Ka dib markii aan biyo ahayn.
Mustaqbalka, ciidda u baahan tahay waraabin dhexdhexaad ah, hal mar toddobaadkii waa ku filan. Warshad walba waxaa loo waraabiyaa si gooni ah. Habkani wuxuu joojiyaa koritaanka iyo fidinta geedo.
Waa muhiim! Tamaandhada waxaa lagu keydiyaa mugdiga, sababtoo ah marka ay timaado qorraxdu si toos ah, waxay si deg deg ah u lumiyaan fitamiin C
Laba toddobaad kaddib marka la beero geedo dhir ah oo waaweyn ayaa u baahan in la quudiyo. Marka 10 litir oo biyo ah, qaado 2 qaado oo ah ash alwaax iyo qaaddo oo ah superphosphate. Isticmaal - hal koob oo kijis ah.
Toban maalmood ka dib, geedo u baahan yahay in lagu quudiyo leh isku dar ah: 10 litir oo biyo ah oo lagu daray 2 qaado oo nitrophoska ah. Isticmaalku wuxuu la mid yahay sida quudinta hore. Waraabinta isku dhafka.
Sida loo daryeelo noocyo kala duwan oo yaanyo ah Maryina Rosha
Waxaad soo iibsatay yaanyada Marina Grove oo aadan aqoon sida loo daryeelo iyaga? Aad u fudud: noocyada kala duwan ee Marina Grove waa gabi ahaanba aan qabyo ahayn oo uma baahna daryeel gaar ah. Waxaa jira qaar ka mid ah talooyin loogu talagalay sii kordhaya dhexdhexaadinta.
Soo dajinta sariiraha waa in la bilaabo kaliya marka ciidda lagu kululeeyo aqalka dhirta lagu koriyo. In habka koritaanka iyo formation of geedo u baahan tahay bacarimiso Bacriminta adag.
Biyaha dhirta waxay u baahan yihiin biyo diirran sidaa darteed ciidku wuxuu ahaa qoyan, waana inuu hubiyaa in uusan qallajin karin gabi ahaanba ilaa waraabinta soo socota.
Marina Grove geeddi-socodka koritaanka iyo samaynta miro waxay u baahan tahay bacarimiso Bacriminta adag.
Tamaandhada Marina Grove waxay leedahay dulqaad sare.
Waxay u adkeysanayaan fayrasyo ​​badan oo badan, sida fusarium, cladozpirioz iyo maasuuda tubaakada.
Goynta Marina Grove
Marina Grove waxay leedahay dhalid sare. Haddii saddex duurka waxaa la dhigaa mitir laba jibbaaran, kadibna ururinta mid ka mid ah waxay noqon doontaa qiyaastii 6 kiilo. Tani waxay si caadi ah ugu badan tahay noocyada isdhexgalka ee yaanyada. Kala duwanaanshaha kaliya ayaa ah xajmiga burushyada leh miraha.
Waa muhiim! Ha ku keydin yaanyada meelaha qabow. Kadibna waxay dhaqso u lumiyaan caafimaadkooda iyo dhadhankooda.
Marina Grove: Fikradaha iyo qasaaraha kala duwan
Faa'iidooyinka Marina Grove waa marxaladaha ugu horreeya ee Bisaylka miro, dhadhanka hodanka ah ee tamaandhada, Bisaylkiisa isku midka ah ee dalagga, ilaalinta wanaagsan inta lagu jiro gaadiidka, iska caabin ah xaaladaha cimilada iyo cudurrada caadiga ah.
Dhibaatooyinka waxaa ka mid ah xaqiiqda ah in noocyada kala duwan ee aan loogu talagelin beerashada dhul furan.
Kadib markaan dib u eegin yaanyinka yaryar ee yaryar, sharaxaadiisa, waxyaallaha beeraha iyo daryeelka, waxaad awoodi doontaa inaad kobciso naftaada oo aad ku raaxaysatid miraha quruxda leh iyo mid caafimaad leh.